बास बस्ने ठाउँ पनि पाइन ! | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
म रौतहटको परोहा नगरपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई वर्षदेखि ‘एच ए’(हेल्थ असिस्टेन्ट)का रूपमा कार्यरत छु ।
११ चैत २०७६ मा देशभर लकडाउन भयो । त्यसपछि भारत लगायत अन्य देशबाट आउने नागरिकलाई राख्नका लागि हामीले यहाँ क्वारेनटिन बनाउने काम सुरु गर्‍यौँ । लकडाउन सुरु भएपछि हाम्रो कामको लोड पनि थपियो त्यसैले त्यसपछि त एक दिन पनि आरामासँग बस्न पाइएन ।
लकडाउन सुरु भएसँगै मेरो दैनिकी रौतहटका ९ वटा नगरपालिकामा रहेका क्वारेनटिनमा बसेकाहरूको आरडीटी जाँच गर्ने, स्वाब सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी थियो । अझै स्वाब सङ्कलन गर्ने मात्र होइन सङ्कलित स्वाब मोटरसाइकलमा बोकेर जनकपुर र काठमाडौँको प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउने जिम्मा पनि मेरै थियो । कोरोना लाग्ने डरले यो काम गर्न सबै स्वास्थ्यकर्मी इच्छुक भएनन् । त्यसमाथि कर्मचारी समायोजन पूर्ण नभइसकेको हुँदा जनशक्ति पनि अभाव थियो । त्यही कारण ९ वटा नगरपालिकाको स्वाब सङ्कलन गर्ने र परीक्षणका लागि पठाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आईपर्यो ।
अहिले प्रदेश नं दुईमा कोरोना महामारीले चरम रूप लिइरहँदा मैले बस्ने ठाउँ पनि पाईँन । पहिला म रौतहटको सदरमुकाम गौरमा बस्थें । स्वास्थ्यकर्मी भनेर थाहा पाएपछि घरभेटीले कोठामा बस्न दिएनन् । त्यसपछि म परोहा नगरपालिकाको स्कुलको पुस्तकालयमा नै बास बस्न थालें ।
यस्तो कठिन समयमा काम गरिरहँदा मलाई खान बस्नै समस्या भयो, चाउचाउ, बिस्कुट, फ्रुटिको भरमा मैले दिनरात बिताएँ । यती दुःख र कष्ट झेलेर काम गरेको मानिसहरूले मूल्याङ्कन गरेनन् बरु मैले उल्टो बस्ने ठाउँको पनि ठेगान नहुने स्थितिमा पुगें ।
मेरो जिम्मेवारी स्वाब सङ्कलन गर्ने र प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउने भए पनि मसँग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) पर्याप्त थिएन । त्यसैले पनि जोखिम मोलेर भए पनि काम गरिरहेको नै थिएँ । मैले रौतहटका विभिन्न क्वारेनटिनमा पुगेर दिनभर सङ्कलन गरेको स्वाब बोकेर त्यहीँ दिन नै जनकपुर स्थित प्रयोगशालामा पुर्याउनु पर्थ्यो । यसरी दिनभर सङ्कलन गरेको स्वाब जनकपुर पुर्‍याएपछि फेरि त्यहाँबाट रातारात आएर अर्को दिन फेरि स्वाब सङ्कलन जानुपर्थ्यो ।
मसँग पर्याप्त पिपिई थिएन । न त मेरो खाने, बस्ने ठेगान नै थियो । मलाई जोखिमको डर भए पनि कति रात त म मान्छेले भरिभराउ भएको क्वारेनटिनमै बस्नुपर्‍यो । अनि एउटै पिपिई पाँच दिनसम्म पनि लगाउनुपर्‍यो ।
स्वाब सङ्कलनमा हिँड्दा कहिलेकाहिँ कतै बस्ने ठाउँ नहुँदा क्वारेनटिनमा नै बस्नु पर्ने हुन्थ्यो । यसरी क्वारेनटिनमा बस्दाको मानिसहरूको व्यवहार अजिब हुन्थ्यो । क्वारेनटिनमा स्वाब सङ्कलन गर्न जाँदा मानिसहरू ‘म’ ‘म’ भन्दै अगाडी सर्थे । तर, त्यही क्वारेनटिनमा म बास बस्न पुग्दा भने मानिसहरू विरोध गर्थे ।
मैले यो समयमा भोगेको कुरा सायद सबै शब्दमा त व्यक्त गर्न सक्दिन कि जस्तो पनि लाग्छ । मेरो धेरै दिनसम्म खाने, बस्ने ठेगान नभएपछि मैले एक दिन परोहा नगरपालिकाका मेयरलाई भात खान नपाएको गुनासो गरें । अनि मेयरले झट्ट जवाफ दिए, ‘बिस्कुट खानुहोस् ।’ मेयरको जवाफ सुनेपछि मलाई भाउन्न छुटेर आयो । त्यसपछि मैले कहिल्यै गुनासो गरिन । आफूले भोग्नुपरेको पीडा र अप्ठेरो सुनाइन । आफ्नो काममा लागिरहें… ।
धेरै पटक काम कामको सिलसिलामा हिँड्दा रौतहटमा मात्र होइन काठमाडौँमा पनि बेठेगान भएर बस्नुपरेको छ । अझै काठमाडौंमा त म ४ दिनसम्म भोकै बसेको छु । हाम्रो तिर पिसिआर किटको अभाव भएपछि प्रदेश दुईमा सङ्कलित स्वाब जनकपुरमा परीक्षण नहुने भयो । त्यसपछि म २० जेठमा २ सय २२ जनाको स्वाब बोकेर काठमाडौँ आइपुगेँ । काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि परीक्षणको भार धेरै हुँदा स्वाब ‘मिक्स’ हुने सम्भावना भएपछि स्वाब छाडेर जान मिलेन । म एक हप्ता काठमाडौँमै बस्नुपर्ने भयो ।
हप्ता दिनको काठमाडौँ बसाइँमा म दिनभर प्रयोगशालामा स्वाबहरूलाई सिरियल नम्बरका आधारमा मिलाउने र ती स्वाबलाई ल्याबमा दर्ता गर्ने काम गर्थें । रात परेपछि प्रयोगशालाकै करिडोरमा निदाउँथे । ल्याबकै प्यासेजेमा सुत्थें । त्यहाँको कुर्सीमा मलाई बसेको देखेपछि डरले मेरो नजिक कोही पर्दैन थिए । ७ दिन काठमाडौँ बस्दा ३ दिन डा. रुना झाले (प्रयोगशाला प्रमुख) खाना खुवाउनुभयो । त्यतिखेर तराईमा संक्रमण दर उच्च रहेको र म त्यहिँबाट आएको हुनाले उहाँ पनि डराउनुभयो । चाउचाउ, बिस्कुट र रेडबुल खाएर सम्म बसेको छु ।
मेरो घर रौतहट गरुडा नगरपालिकामा हो । मेरो परिवारमा ११ जना सदस्य छन् । परिवारमा कमाउने म मात्र हुँ । यो विपदमा काम गरे बापत नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता मैले लिँइन । बरु मैले उक्त पैसा आइसोलेसन र क्वारेनटिनमा खर्च गर्नु भनेर नगरपालिकालाई नै फिर्ता गरेँ ।
मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो कोरोनासँगको युद्धमा यसरी पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री बिना नै काम गर्दा सङ्क्रमित भएर म मर्न पनि सक्छु । तर मेरो कारणले गर्दा धेरै जनाको ज्यान त जोगिन्छ । त्यही भएर पनि आफ्नो तर्फबाट दिलोज्यान दिएर काम गरिरहेको छु यस्तै सङ्कटमा चाहिने हो हामी जस्ता मान्छे । यस्तो बेला लुकेर बस्नु हुँदैन नि त ! त्यसैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो काम गरिरहेको छु ।
(यो कथा १८ साउनमा अमरुल आलमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर सगर चन्दले लेख्नुभएको हो।)
१२ पुष २०७७, आईतवार १८:३३
कठिनाइबीच अघि बढ्ने प्रयास
१९ श्रावण २०७७, सोमबार १३:४४